किन टिक्न सकेन विवेकशील र साझाको एकीकरण ?::kamananews
किन टिक्न सकेन विवेकशील र साझाको एकीकरण ?
२८ पौष २०७५, काठमाडौँ, एकीकरणको सत्र महिना नपुग्दै विवेकशील साझा दल फुटेको छ। एकीकरणअघि विवेकशील नेपाली दलमा रहेका सबै केन्द्रीय सदस्य पार्टीबाट अलग भएका छन्।
मिश्रले पाँच केन्द्रीय सदस्य थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा राख्ने तयारी गरेपछि थापा समूह हतार-हतार दल दर्ताका लागि आयोग पुगेको हो। मिश्रले पुस ३० गते केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका थिए।
मिश्रले पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि बढाउन नसकेको थापा समूहको आरोप छ।
‘हाम्रो बुझाइ नै फरक भयो। व्यवहार पनि क्रमश: फरक पर्दै गएपछि सँगै रहन नसक्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ थापा समूहकी नेतृ रञ्जु दर्शनाले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘वैकल्पिक राजनीतिबाट निकास दिन नसकिने देखेर हो कि, उहाँहरू धेरै हदसम्म परम्परावादी ढंगले अघि बढ्न खोज्नुभयो।’
दर्शनाले काम गर्न इच्छुक नयाँ पुस्तालाई समेट्ने पक्षमा मिश्र समूह नदेखिएको बताइन्।
मिश्र समूहले भने सह-संयोजक भए पनि थापाले पार्टीमा ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ।
‘तीन महिनादेखि पार्टीको केन्द्रीय समिति बस्न सकेको थिएन,’ मिश्र पक्षका एक सदस्यले भने, ‘उज्वल थापा तीन महिना अमेरिका गएर बस्नुभयो। नेपाल आएपछि रविन्द्र मिश्रसँग सम्पर्कसमेत गर्नुभएन। बरु मेडिटेसनमा गएको खबर पठाउनुभयो।’
ती सदस्यले ‘इन्ट्रोभर्ट’ स्वभावका उज्वल र ‘एक्सट्रोभर्ट’ रविन्द्रबीच तालमेल नमिलेकै कारण पार्टी फुटेको बताए।
विवेकशील दलकी सदस्य दर्शनाले भने थापाले तयार गरेको प्रतिवेदन पार्टीले स्वीकार गर्न नखोजेपछि दूरी बढेको बताइन्।
‘एक जना संयोजकले पार्टीको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो। त्यसमा पार्टी विधान र योजनाअनुसार हिँडेको छैन भनिएको छ,’ दर्शनाले भनिन्, ‘सुधारतर्फ अघि बढौं भन्दा प्रतिवेदन साइड लगाउने कुरा भए। हामीलाई पनि यस्ता कार्यले डरको आभास भयो।’
उनले प्रतिवेदनमा छलफलको अभ्याससमेत गर्न मिश्र पक्षले नमानेपछि ‘विवेकशील साझा वैकल्पिक राजनीतिको धरातल हैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्। उनले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बुझाइमा समेत फरकपन देखा परेको उल्लेख गरिन्।
‘संक्रमणकालीन अवस्थासम्म सहभागितामूलक व्यवस्थामा जान सकिन्न भन्ने तर्क पनि आए,’ दर्शनाले भनिन्, ‘यस्त विषयले हामीलाई मिल्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍यायो।’
मिश्र पक्षले भने पार्टीका काममा थापा निष्क्रिय बसेको आरोप लगाएको छ।
‘मेरा कुरा सुनिएन भन्ने उहाँलाई परेको देखियो,’ मिश्र पक्षका एक सदस्यले भने, ‘त्यो उहाँकै अकर्मण्यता हो। पर्सनालिटी ग्याप भयो। पार्टीलाई दुई-चार जना मान्छेको अभियानमा सीमित पार्न खोज्नुभयो।’
दर्शनाले भने पछिल्लो अनुभवबाट विगतमा विवेकशीलले अपनाएको ‘स्पिरिट’ नै सत्य रहेछ भन्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्।
‘हाम्रो भोगाइ नै सही रहेछ भन्ने लाग्यो। पुरानै विवेकशील होइन, हामी त्यसलाई अझ परिस्कृत बनाउँछौं,’ दर्शनाले भनिन्।
मिश्र पक्षका सदस्यले भने राष्ट्रिय सभामा राधेश्याम अधिकारीको उपस्थितिको विषय उठेदेखि पार्टीमा खटपट सुरु भएको बताए।
‘पूर्व विवेकशीलका साथीहरूले उज्वललाई भ्रष्ट व्यक्तिलाई मतदानको किन निर्णय भयो भनेर दबाब दिएपछि उहाँ हच्किनुभयो। निर्णयबाट पछि हट्नुभयो। जबकि उहाँसमेत उपस्थित भएर निर्णय भएको थियो,’ मिश्रनिकट ती सदस्यले भने।
मिश्र पक्षले पार्टीको कोष संकलन र संगठन विस्तारमा समेत उज्वलले सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ। थापा पक्षको भने मिश्रले पार्टीमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको आरोप छ।
‘पारदर्शितामा संकुचित भयौँ भन्ने कुरा नेतृत्व पंक्तिले बुझेको भए यो स्थिति आउने थिएन,’ दर्शनाले भनिन्।
केही समयअघि विवकेशिल साझाको बानेश्वर बैठकमा विभिन्न कमिटीको नेतृत्व चयनलाई लिएर विवाद भएको थियो। उक्त विवादका कारण पनि पार्टीमा विभाजनको रेखा देखा परेको थियो।
‘केटाकेटी राजनीति भनेर खुइल्याउने काम केही दिन हुने भए,’ मिश्रनिकट ती सदस्यले भने, ‘राजनीति गर्ने विषयमा दुवैको नियत शंका गर्नुपर्ने छैन। तर, काम गर्ने तरिका मिलेन।’
मिश्र पक्षले पूर्व विवेकशील पार्टीका सदस्यहरू राजनीतिप्रति ‘प्यासनेट’ भए पनि अभ्यास बुझ्न नखोजेको आरोप लगाएको छ।
‘उहाँहरू अभियान मात्र भन्नुहुन्छ। गोविन्द केसीको समर्थन, अख्तियारमा रविन्द्र अधिकारीविरुद्ध उजुरी गर्ने,’ मिश्रनिकट ती सदस्यले भने, ‘अभियानभन्दा बढी उहाँहरूले राजनीतिको बृहत् चित्र हेर्न सक्नुभएन। सायद बुझाउनै सकिएन।’
मिश्र पक्षले थापाले पार्टीको निर्णयबिना एक्लै जिल्ला भ्रमण गरेर १८ पानाको रिपोर्ट तयार पारेको र उक्त रिपोर्ट केन्द्रीय समितिले स्वीकार गर्नुपर्ने अनुचित अडान राखेको आरोप लगाएको छ।
‘समीक्षा भनेको भए हुन्थ्यो। व्यक्तिगत रिपोर्ट तयार गरियो,’ मिश्र पक्षले आरोप लगाउँदै भनेको छ, ‘प्रक्रिया गलत भयो।’
विवेकशील पक्षले भने मिश्र एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको, पार्टीमा सामूहिकता मान्न छाडेको, अभियानहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकोजस्ता आरोप लगाएको छ।
विगतमा भिन्दाभिन्दै राजनीतिक दल भए पनि २०७४ साउन ११ गते विवेकशील र साझा एकीकरण भएका थिए। सत्र महिना नबित्दै पार्टी दुई टुक्रा भएको हो। स्रोत : setopati.com